Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Hiper-barrio tamin’ny Jolay 2018
Hiper-barrio · Jolay, 2018
Tantara mikasika ny Hiper-barrio tamin'ny Jolay, 2018
Mediam-bahoaka28 Jolay 2018
Mediam-bahoaka27 Jolay 2018
Fandraketam-peo momba ny La Loma avy amin'ny HiperBarrio
Mediam-bahoaka24 Jolay 2018
Nanomboka fandraketam-peo ny ConVerGentes, vondrona tanora mpanao gazety avy ao San Javier La Loma izay mandrafitra ny HiperBarrio.
Hiperbarrio: Fetiben'ny balaonina tao La Loma
Mediam-bahoaka19 Jolay 2018
Nandefa sary sy horonantsary momba ny fetiben'ny Balaonina tao La Loma (Festival des Globos de La Loma 2010) ireo olontsotra mpampita vaovao ao amin'ny Hiperbarrio tohanan'ny Rising Voices. Notantaraina mivantana tao amin'ny Twitter sy nalefa tamin'ny horonantsary mivantana an-tserasera ilay hetsika.
Miangaly rap momba ny fampahalalam-baovaon'olontsotra i Jorge Jurado
Iray amin'ireo tanora miisa eo amin'ny 20 eo ho eo ao amin'ny sarangan'ny mpiasa ao amin'ny fokonolona ambanivohitra ao San Javier La Loma izay nanangana ny vondrona fampitam-baovaon'olontsotra" ConVerGentes." i Jorge. Anisan'ny iray amin'ny vondrona telo izay ao anatin'ny tetikasa fanentanana lehibe indrindra HiperBarrio izy ireo.
Mediam-bahoaka08 Jolay 2018
Raha vao nanomboka ny volana May 2007 ny Rising Voices dia nanantena izahay fa hisy farafaharatsiny ny sasany amin'ny mpandray anjara amin'ny tetikasa hisandratra ho mpitarika matanjaka. Tsy nanantena anefa izahay na izany aza fa ho vetivety dia hiseho ireo mpitarika ireo ary vehivavy ny maro an'isa tamin'izy ireo.